अपडेट: १२ साउन, २०७९
हामीले नेपाली काङ्गे्रसस“ग पनि सहकार्य गरिरहेका छौ“। शान्ति प्रक्रिया नटुगिन्जेल र लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा नहुन्जेल यो सहकार्य आवश्यक छ भनिरहेका छौ“। यति हु“दाहु“दै पनि समग्र चरित्रका आधारमा विश्लेषण गर्दा काङ्गे्रस यथास्थिति र नवउदारवादको पक्षमा उभिने अनि परिवर्तनका कतिपय …एजेन्डा’लाई आत्मसात गर्न नसक्ने शक्तिका रूपमा रहेको छ। राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत नगरुन्जेल काङ्ग्रेससितको सहकार्य जति आवश्यक छ, त्यति नै उसको त्यो चरित्र वा कमजोरीसित जुध्न सक्नुपर्छ। हामी यस्ता शक्तिका बीचमा सहकार्यमा रहेका बेला उनीहरूका गलत विचारका विरुद्धमा जुध्छौ“ कि जुध्दैनौ“? हामी सहकार्य अगाडि बढाउन चाहन्छौ“। तर, गलत विचार र अनुचित व्यवहारहरूका विरुद्धमा जुधेनौ“ भने माओवादीस“गको सहकार्य परिणामदायी हुन सक्दैन। त्यस्तै, यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने काङ्गे्रसको विचार र व्यवहारका विरुद्धमा जुधेनौ“ भने ऊस“गको सहकार्य पनि परिणामदायी हुन सक्दैन। त्यसैले आज हामी जुन सहकार्यको कालखण्डमा छौ“, हाम्रो लडाइ“ पनि स“गस“गै चल्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यसकारणले पनि एमाले सुदृढ हुनैपर्छ–एकताबद्ध हुनैपर्छ र जनतालाई परिचालन गर्ने अभियानमा जुट्नैपर्दछ। यदि हामीले यी कुरा गर्न सकेनौ“ भने अतिवादको प्रभावबाट हामीले मुलुकलाई मुक्त गर्न सक्दैनौ“, जनताले चाहेको परिवर्तन संस्थागत गर्न सक्दैनौ“। सङ्गठन सुदृढीकरण र जनपरिचालनलाई अभियानका रूपमा अगाडि सारिरहेका बेला हामीले अहिलेको यो राजनीतिक वास्तविकतालाई बु‰नुपर्छ।
भावनात्मक कुरा गरेर मात्रै एमाले एकताबद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन? यो गम्भीर छलफलको विषय हो। हामीले लिएका विचार, निर्णय र कामका बारेमा हजारौ“ कार्यकर्ताले छलफल गर्न चाहेका छन्। यदि यी विषयहरूको समीक्षात्मक आधारमा उभिएर नेकपा (एमाले) आउ“छ भने यसको सुदृढ एकतालाई कसैले भत्काउन सक्दैन। यिनै मान्यता, चेतना र अडानका साथ हामी जनताका बीचमा पुग्न सक्नुपर्छ। एकताको कुरा गर्दा लेनिनले एक ठाउ“मा भन्नुभएको छ– …एकता बडो राम्रो चीज हो। तर, एकता लामो–लामो भाषणमा प्राप्त गर्न सकि“दैन, एकता कुनै राम्रो र लामो लेख लेखेर मात्रै प्राप्त गर्न सकि“दैन। एकता भनेको कम्युनिस्ट पार्टी वर्गीय विचार तथा संस्थागत परिचालनबाट च्यूत हुन्छ कि हु“दैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ। यी कुराबाट विमुख हु“दा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुन पुग्छ र त्यसभित्रको एकता पनि असम्भव हुन पुग्छ।’
हामी एकता चाहन्छौ“। तर, त्यो एकता भनेको के हो र त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? हामीले बु‰नुपर्दछ– एकता भनेको विचारमा आधारित हुन्छ, नीतिमा आधारित हुन्छ र आचरणमा आधारित हुन्छ। विचार र नीतिभन्दा फरक रहेर एकताको कुरा गर्नु ढो“ग र पाखण्ड मात्र हो, एकताको चाहनाले प्रयोग गरिएको …प्रिय’ शब्दलाई दुरुपयोग गर्नु मात्रै हो। यस्तो हु“दा एकता व्यावहारिक जीवनमा लागू हुन सक्दैन। हामीले आठौ“ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्‍यौ“, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा विचारको फैसला गर्‍यौ“ र लोकतान्त्रि। र, त्यसैअनुसार विधान निर्माण गर्‍यौ“। त्यसयता हामी सरकारमा गएका छौ“, हामीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छौ“। यसक्रममा सरकार निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा राम्रा काम पनि गरेका छौ“। तर, जनताले देख्ने र उनीहरूलाई घोच्ने गरी हाम्रा केही कमजोरी पनि प्रकट भएका छन्। एकताको कुरा गर्दा हामीले गरेका कमी–कमजोरीहरूका बारेमा जनता र कार्यकर्ताका बीचमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा खुलस्त आत्मालोचना गर्नु पर्दछ कि पर्दैन? जबसम्म हामी ती कमजोरीका बारेमा कार्यकर्ता र जनताका बीचमा खुलस्त छलफल गर्न सक्दैनौ“, तबसम्म एमालेभित्र चाहेर पनि राम्रो एकता हुन सक्दैन।
यसबीचमा एमालेका नाममा अनेक खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्। अत्यन्त विसङ्गत र आपत्तिजनक व्यवहारहरू पनि देखिएका छन्। म यो वा त्यो नेताको कुरा गर्न चाहन्न, विचारका नाममा अनेक खाले अभिव्यक्ति आएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले एमाले पङ्क्तिलाई धेरै मात्रामा अन्योलमा पुर्‍याएका छन् र विचलित पनि गराएका छन्। आज …सुदृढीकरण अभियान’ चलाइरहेका बेला ती तमाम कुराहरूका बारेमा खुलस्त उल्लेख गर्न सक्छौ“ कि सक्दैनौ“? हाम्रा कमजोरी र सबल कुराहरू कहा“–कहा“ रहे? हामी प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संस्थागत परिपाटी कमजोर भएमा नेताहरूले जति भाषण गरे पनि एकता हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी र यसका प्रत्येक नेता–कार्यकर्ता संस्थागत ढङ्गले चल्नुपर्दछ। मन परेको बेलामा मात्रै संस्थागत निर्णय मानिन्छ र चित्त नबुझेको बेलामा संस्थागत ढङ्गले गरिएका निर्णयहरूलाई तिलाञ्जली दिइन्छ भने त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता कमजोर हुन पुग्छ। यसबीचमा एमालेभित्र विभिन्न ठाउ“मा माथिदेखि तलसम्म यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। …हामी लामो इतिहास बोकेका मान्छे हौ“, इच्छा पर्‍यो भने निर्णय मान्छौ“, होइन भने मान्दैनौ“’ भन्ने चिन्तन, प्रवृत्ति र अभिव्यक्ति जुन–जुन ठाउ“मा देखिएका छन्, ती सबै गलत हुन् भन्छौ“ कि भन्दैनौ“? हामीले ती कुराहरूप्रति खबरदारी गरेर मात्र एमालेभित्रको एकतालाई व्यावहारिक साङ्गठनिक जीवनमा अनुवाद गर्न सक्छौ“।
मान्छेहरूले एमालेमा विचारको पक्ष कमजोर भयो भनिरहेका छन्। जनताको बहुदलीय जनवादलाई …जुनबेला जे–जे आइपर्छ, त्यही गर्दै जाने’ जस्तो बनाइयो भन्ने आलोचना भइरहेको छ। मान्छेहरूले प्रश्न गर्दै छन्– …जब एमाले सरकारमा जान्छ, त्यसबेला …जबज’लाई बिर्सन्छ कि सम्झन्छ? अनि, जब सरकार छोडेर बल्खुमा आउ“छ, त्यसबेला अलिअलि सम्भि्कएजस्तो गर्छ, जब प्रतिपक्ष बनेर बेला–बेलामा अप्ठ्यारो सहनुपर्छ, त्यसबेला गाउ“बस्तीका कार्यकर्ताहरूका बीचमा गएर …जबज’लाई …क्रान्तिकारी’ रङ चढाएर एमाले बोल्छ।’ यी प्रश्नहरू बिनाकारण जन्मिएका छैनन्। हाम्रो मनमा जे–जे आउ“छ, त्यही–त्यही गर्दै जाने अनि त्यसैलाई विचारको नाम दिने जस्तो कुरा हुन सक्दैन। जबज समाजको शान्तिपूर्ण प्रगतिशील रूपान्तरण गर्ने विचार हो। सिंहदरबारमा गएको बेला, सिंहदरबार छोडेर बल्खुमा फर्केको बेला वा गाउ“बस्तीमा कार्यकर्ता/जनताका बीचमा गएको बेला– सधै“ जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा हाम्रो बुझाइ एउटै हुनुपर्छ। जनताको बहुदलदीय जनवादको अवसरवादी व्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन र हुन सक्दैन।
(एमाले महासचिव पोखरेलले गत मंसिर २८ गते केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित …पार्टी सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन अभियान–२०६८’ घोषणा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारहरूको सम्पादित अंश)